“Smooth night” faha-10: hamerenana an’i Lionel Ritchie | NewsMada
Par Taratra sur 24/07/2019
Malalanirainy, Jacquis Randri ary Fabre Rakotozafy. Izy telo mianadahy ireo indray no nosafidin’ny mpikarakara hamelona ny “Smooth night”, izay hiditra amin’ny andiany faha-10 amin’ity. Hotontosaina etsy amin’ny Kudeta Carlton Anosy ity fampiarahana talenta ity, ny alin’ny alakamisy 25 jolay izao.
Ho an’ireo nanaraka ny andiam-pampisehoana “Smooth night”, natao hameloman’ireo mpanakanto malagasy ny sanganasan’ireo andrarezin’ny mozika maneran-tany izany. Nosafidina manokana ny sanganasan’i Lionel Ritchie amin’ity manaraka ity. Notsongaina manokana ireo be mpankafy, sy ny mety amin’ireo mpanakanto ihany koa.
Tsy olana amin’ny feo sy ny fironan’i Jacquis Randri eo amin’ny mozika ny hanaovany Lionel Ritchie. Manana ilay feo miavaka ary efa nasongadiny tamina fifaninanan-kira ihany koa i Malalanirainy. Mety vaovao be kosa i Fabre Rakotozafy, saingy mpanakanto tanora manan-talenta, ary fotoana iray hanehoany izany io fiarahana io. Hanaraka azy telo mianadahy ireto ireo mpitendry tanora efa anisan’ireo kalaza amin’izao fotoana izao, toa an-dry Josia (ampanga maroanaka), Hents (gitara beso) ary Njaka (vata maroafitsoka).